အသည်းကွဲတာနဲ့ ဘဝပျက်ရောလား? | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန်, သမီးရည်းစား ဆက်ဆံရေး အသည်းကွဲတာနဲ့ ဘဝပျက်ရောလား?
ဘဝမှာ လူလားမြောက်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကစလို့ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်တဲ့ထိတောင် ကမ္ဘာပေါ်က ရှိရှိသမျှ လူသားတိုင်းနဲ့ ကင်းကွာလို့မရတာတစ်ခုကတော့ အချစ်ဆိုတဲ့အရာပါပဲ…
အချစ်နဲ့ပက်သက်လာရင် သဘာဝက ချမှတ်လိုက်တဲ့ လောကဓမ္မတာအရ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တွေ့ကြဆုံကြ ချစ်ကြ ကြိုက်ကြမယ်။
ဒါပေမယ့် သွေးမတော်သားမစပ်ကြတဲ့ သူစိမ်းလူသားနှစ်ယောက် ချစ်ကြိုက်မိပြီဆိုမှတော့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အကြောင်းအရင်း မတိုက်ဆိုင်တာမျိုးတွေရှိလာမယ်… နောက်ဆုံး ဘယ်လိုမှရှေ့ဆက်လို့မရတော့တဲ့အဆုံးမှာ လမ်းခွဲဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြမယ်…ဒီလို လမ်းခွဲတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာ နှစ်ဦးသဘောတူ လမ်းခွဲတာမျိုးလဲ ရှိနိုင်သလို တစ်ဖက်က ကိုယ့်ကို ထားခဲ့ပြီး ပလစ်ခဲ့တာမျိုးတွေလဲရှိနိုင်ပါတယ်…ဘယ်လိုအကြောင်းအရင်းမျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် လမ်းခွဲတယ်ဆိုကတည်းက အသည်းကွဲမယ်… သိပ်ချစ်တတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ အသည်းကွဲတာက ကိုယ့်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံး ဆုံးရှုံးလိုက်ရသလိုမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်…
ဒါပေမယ့် သိထားသင့်တဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုကတော့ ဒီလိုအသည်းကွဲတဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံက လူတိုင်းအတွက် ထာဝရဖြစ်တည်နေမယ့် ရေးကြီးခွင်ကျယ်ကိစ္စတစ်ခု မဟုတ်တာပါပဲ… အဲ့လိုမဟုတ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၃) ချက် ရှိပါတယ်…
အကြောင်းအရင်း (၁) – အသည်းကွဲတာက ဘဝရဲ့လမ်းဆုံးမဟုတ်လို့…
ဘဝမှာ ချစ်ရတဲ့သူရှိလာတဲ့အခါမှာ ကိုယ်က သူ့အပေါ် ယုံကြည်ခဲ့ဖူးတာတွေ၊ အားကိုးမှီခိုဖူးတာတွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေထားဖူးတာတွေ ရှိခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်တန်လို့ ခွာပြဲကြတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာ “ငါ့အပေါ်တော့ သူလုပ်ရက်လိုက်လေခြင်း” ဆိုပြီး နာကျည်းမယ်… ရင်နာနာနဲ့ စိတ်ဆင်းရဲမယ်…စသဖြင့် ခဏတာ ပေါက်ကွဲကြမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အသည်းကွဲတာက သေလောက်တဲ့ ရောဂါမဟုတ်တဲ့အတွက် လက်တွေ့ကျကျစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် သူတစ်ယောက် ကိုယ့်အနားမှာ မရှိပေမယ့်လဲ ကိုယ်ရှင်သန်နေရတဲ့ဘဝကတော့ ဒီအတိုင်းဆက်သွားနေမှာပါပဲ။
အကြောင်းအရင်း (၂) – ကွဲနေတဲ့ အသည်းထက် ပိုအရေးကြီးတာတွေ ရှိလို့
အသည်းကွဲလို့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ခံစားတာကို နားလည်နိုင်ပေမယ့် အသည်းကွဲတာကိုပဲ ခေါင်းထဲ ၂၄နာရီထည့်ထားပြီး ဘဝကို ပေပေတေတေနေရင် လူဖြစ်ရှုံးမှာအသေအချာပါပဲ။ လူ့ဘဝမှာ အသည်းကွဲတာထက် ပိုအရေးကြီးတဲ့ စားဝတ်နေရေးတွေရှိမယ်… ကိုယ်နဲ့အတူ ဘဝကို အစတည်းက ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ မိသားစုရှိမယ်… ကိုယ်ရဲ့ ဘဝတိုးတက်လမ်းတွေရှိမယ်…စသဖြင့်ပေါ့!! ဒါပေမယ့် အသည်းကွဲတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဒီလို အရေးကြီးတာတွေကို ခေါက်ထားမယ့် ချိဖချိမတွေအနေနဲ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ နောင်တတွေ တလှေကြီးရသွားနိုင်ပါတယ်။
အကြောင်းအရင်း (၃) – လူ့ဘဝဆိုတာ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပဲ ရှင်သန်ရတဲ့ အရာတစ်ခုမို့လို့
လူ့ဘဝရဲ့ ရှေ့အနာဂတ်ဆိုတာ ကြိုမြင်နိုင်တဲ့ အရာမဟုတ်တဲ့အတွက် တွေ့ကြုံရမယ့် မနက်ဖြန်တိုင်းက ဆန်းကြယ်မှုတွေနဲ့လဲ ပြည့်နှက်နေနိုင်ပါတယ်။ ပြီးဆုံးသွားတဲ့ အချစ်ရေးမှာ ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းတဲ့ချစ်သူနဲ့ တွေ့ကြုံခဲ့ရလား? ဒါတွေကို မေ့ပြီး ပြီးခဲ့တာတွေပြီးပါစေတော့… ထင်ထားထက်ပိုပြီး လောကကြီးမှာ ကြင်နာတတ်တဲ့လူတွေများပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ နောက်ပိုင်း တွေ့ရမယ့် အချစ်သစ်မှာ ကိုယ်က ကံကောင်းတဲ့လူလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်… အဓိကပြောချင်တာက မျှော်လင့်ချက်ထားပါ… လက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့…အားလုံးက အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့လူတွေချည်းပါပဲ…
ကဲ ဒီအကြောင်းအရင်း (၃) မျိုးကို သိသွားပြီးပြီဆိုရင်တော့ အသည်းကွဲပြီးလေလွင့်နေသူ ချိဖ ချိမတွေအနေနဲ့ အသည်းကွဲတယ်ဆိုတာ ပါမွှားကိစ္စတစ်ခုဆိုတာ သဘောပေါက်သွားကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ…